गोरखाका पहाडलाई बिदेशी नाम राख्नु कतिको जायज ! | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखाका पहाडलाई बिदेशी नाम राख्नु कतिको जायज !
Published On : २८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ११:२६
नरहरि सापकोटा :
आर्थिक सहयोग हुन्छ भन्ने बहाना स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरूले आफ्ना डाँडा र थुम्कालाई नियम विपरीत विदेशी नागरिकको नाममा आफूखुसी नामकरण गर्न थालेका छन् । स्थानीय संस्कृति, पहिचान र अस्तित्व समेत मेटाउने गरी आर्थिक लाभ हुने भन्दै उनीहरूले त्यसो गर्न थालेको पाइएको छ। खास गरी गोरखामा यस्तो क्रम बढेको छ ।
बहराइनका राजकुमार सेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफाले असोज २१ गते उत्तरी गोरखाको मनास्लु हिमालको आरोहण गरे। हिमाल आरोहणको केही दिन अघि नै चुमनुब्री गाउँपालिका १ सामागाउँ पुगेका राजकुमार सहितको टोलीलाई स्थानीयले आफ्नै भेषभुषमा भव्य स्वागत गरे। राजकुमार आउनुअघि नै स्थानीयले गाउँ भेला गरेर सामागाउँको एउटा डाँडालाई बहराइनको राजपरिवारको नामबाट नामकरण गरे ।
त्यहाँका जनप्रतिनिधिले स्थानीय हुसुरडाँडालाई ‘रोयल बहराइन पिक’ नामाकरण गरिदिए । जुन प्रचलित ऐन, नियम र कानुन विपरीत रहेको छ । चुमनुब्री गाउँपालिका १ सामागाउँ वडा अध्यक्ष वीरबहादुर लामाले त्यस गाउँलाई सहयोग गर्ने वचन दिएकाले हुसरडाँडालाई ‘रोयल बहराइन पिक’ नामकरण गरेको बताए।
राजपरिवारको नाम दिएपछि राजकुमार खुसी भएका र त्यस ठाउँका लागि सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको भन्दै उनी लगायत स्थानीय समेत प्रशन्न देखिएका छन् ।
राजकुमार आउनुअघि नै स्थानीयले गाउँ भेला गरेर सामागाउँको एउटा डाँडालाई बहराइनको राजपरिवारको नामबाट नामकरण गरे ।
त्यहाँका जनप्रतिनिधिले स्थानीय हुसुरडाँडालाई ‘रोयल बहराइन पिक’ नामाकरण गरिदिए। जुन प्रचलित ऐन, नियम र कानुन विपरीत रहेको छ ।
स्वागत कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष वीरबहादुर लामाले पहाडको नाम दिएको औपचारिक जानकारी गराएपछि राजकुमार हेलिकप्टरबाट पहाड हेर्न समेत गएका थिए । कोभिड १९ को प्रभावकाबीच राजकुमार मनास्लु आरोहणका लागि उत्तरी गोरखा जाँदा स्थानीयमा त्रास थियो ।
अन्ततः शेर्पा र सहयोगी सहित ७० जना भन्दा बढीको टोली सामागाउँ पुगेर हिमाल आरोहण गरी फर्कियो ।
तर गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्ता विषयलाई केन्द्रले मान्यता नदिने र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको स्थानीय डाँडाहरुको नाम स्थानीय जनजीवन र संस्कृतिसँग मेल खानेगरी रहेकाले त्यसको अस्तित्व मेटाउन काम गर्न नहुने बताउछन् ।
‘यो विषय गृहमन्त्रालयलाई जानकारी छैन, स्थानीय तहका गाउँ र नगरपालिकाले मितेरी साइनो लगाउने काम हुन्छ तर तर पहाड र थुम्काहरुलाई राजकुमारहरूका नाम राख्ने, व्यक्ति विशेषमा जाने विषय गृहमन्त्रालयमा जानकारी छैन र त्यो मान्य पनि हुँदैन’, प्रवक्ता एवं सहसचिव बुढाले भने ।
राजकुमारको नामबाट पहाडको नाम राख्ने प्रवृत्ति सँगैको धार्चे गाउँपालिकाबाट सुरु भएको हो । धार्चे गाउँपालिका ७ स्थित लापुबेसीमा बेलायतका राजकुमार ह्यारीले विद्यालय पुनर्निर्माणमा सघाए ।
भुकम्पमा भत्किएको विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न बेलायती सेना सहित २०७२ चैत ११ गते उनी गोरखा आएका थिए । एक साता श्रमदान गरेर फर्कने बेला ह्यारीलाई स्थानीयले विद्यालय सँगैको डाँडाँको नाम ‘ह्यारी हिल’ राखिएको जानकारी दिएका थिए ।
पहिलेको डम्फुडाँडा अहिले ‘ह्यारी हिल’ भएको छ । मनास्लु पदमार्गको छेवैमा पर्ने उक्त डाँडामा ह्यारी हिल समेत लेखिएको छ ।
गाउँपालिकाले उक्त ठाउँलाई प्रर्वद्धन गर्न र मनास्लु पदमार्गमा आउने पर्यटकका लागि अकर्षक ठाउँ बनाउने भन्दै ‘ह्यारी हिल’ मा लगानी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए । ‘अहिले बजेट नभएर हो, गाउँपालिकाले त्यहाँ ह्यारीको शालिक पनि राख्ने योजना छ’ उनले भने ।
‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी पर्यटक लोभ्याउने नाममा पहाडका थुम्का वा अन्य डाँडालाई विदेशी नागरिकको नाममा नामकरण गरिएको भए पनि त्यसलाई संघीय सरकारले मान्यता दिन सक्दैन ।
उच्च पदका बिदेशी नागरिक आएका र विद्यालयलाई सहयोग गरेर भवन बनाइदिएकाले सम्झना स्वरुप नाम राखेको उनी बताउँछन् । ‘पदमार्ग भएर हिड्ने विदेशीलाई आफ्नोपन महसुस हुन्छ’ उनले भने ‘विदेशमा पनि यहाँको प्रचार हुन्छ ।’ स्थानीय भाषाको नाम पनि सँगै रहने भएकाले यसबाट कुनै क्षति नहुने उनी बताउँछन् ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई पनि मन्त्रालयमा यस्तो विषयबारे जानकारी नभएको बताउँछन्।
पर्यटक आकर्षित गर्ने र विदेशमा पनि प्रचार हुने लोभमा गरिएको होला तर संघीय सरकारले यस्तो विषयलाई मान्यता नदिने बताए ।
‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी पर्यटक लोभ्याउने नाममा पहाडका थुम्का वा अन्य डाँडालाई विदेशी नागरिकको नाममा नामकरण गरिएको भए पनि त्यसलाई संघीय सरकारले मान्यता दिन सक्दैन । नामकरण गर्ने काम संघीय सरकारकै हुन्छ वा अन्य विधि र प्रकृया हुनसक्छन् तर गोरखामा के गरिएको हो त्यो विषय मलाई जानकारी भएन’, पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
त्यस्तै गोरखाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले स्थानीय नाम मेटाएर नयाँ नामाकरण गर्नु सान्र्दभिक नहुने बताइन। ‘स्थानीयले पाहुनालाई खुसी बनाउन नाम दिए पनि त्यो लिपिबद्ध हुँदैन, हामीले त्यसलाई आधिकारिक मान्दैनौँ’ उनले भनिन् ‘यो सरकारले भने निणर्य गर्न सक्ला ।’ विदेशी नामाकरण हुँदै जाने हो भने स्थानीय नाम कालान्तरमा लोप हुने खतरा रहने उनले बताइन ।